Galmada badan oo la sheegay in ay caafimaadka u fiicantahay siiba... - iftineducation.com
Galmada badan oo la sheegay in ay caafimaadka u fiicantahay siiba…
aadan21 / July 8, 2017
Cilmi baaris cusub oo uu sameeyay machad Mareykan ah ayaa lagu soo bandhigay in galmada badan ay u wadnahafiicantahay caafimaadka, qaasatan difaaca cudurada wadanhaha. Cilmi baarista oo lagu sameeyay ragg ka badan 1000 qof ayaa lagu soo bandhigay in ragga ugu yaraan 2 goor isbuucii galmooda ay yartahay qatarta ka soo wajihi karta wadna xanuunka.
Cilmi baaristaan oo uu sameeyay machad lagu magacaabo England Research Intitute oo ku yaala Maraykanka ayaa socotay mudo iyagoo baaritaan ku haayay qaabka galmada ee ragga ka qeyb qaatay cilmi baarista. Iyadoo ay horay qubarada caafimaadku u cadeeyeen in galmadu caafimaadka guud u wanaagsantahay ayaa cilmi baaristaan cusub waxay qaasatan muujinaysaa xiriirka ka dhexeeya cudurada wadnaha iyo galmada.
Ragga ka qeyb qaatay cilmi baarista ayaa da’dooda u dhaxaysaa 40-70 sano.
HAWEENKA QAYLADA XILIGA GALMADA